Famaranana tamin’ny fomba ofisialy ny iray volan’ny ankizy – Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme
Famaranana tamin’ny fomba ofisialy ny iray volan’ny ankizy
« Ankizy misitraka ny zony, antoky ny ho avy mamiratry ny Firenena ».
Notanterahana teto amin’ny Minisiteran’ny Mponina Ambohijatovo ny talata 30 jona 2020 ny famaranana tamin’ny fomba ofisialy ny fankalazana ny iray volan’ny ankizy. Nandritra ny fisokafan’ny fifaninanana dia nisy ny fandaharana sy fanentanana natao tamin’ny haino aman-jery manerana ny nosy nanamarihana ny iray volan’ny ankizy.
Nambara ofisialy ny vokatry ny fifaninanana tononkalo sy sary nanamarihana izao iray volan’ny ankizy 2020 izao. Nanatrika izany ireo tompon’andraikitra teo anivon’ny Minisiteran’ny Mponina izay notarihin-dRamatoa Minisitra NAHARIMAMY Lucien Irmah, ny solontenan’ny UNICEF, ny solontenan’ny BIANCO sy ireo nitsara ny fifaninanana.
Nampahafantarina nandritra ny fotoana ihany koa ny tranokala « Arozaza » izay fitaovana entina hiadiana amin’ny herisetra hatao amin’ny ankizy hiarahana amin’ny Minisiteran’ny Fitsarana, ny Polisim-pirenena, ny Zandarimaria, UNICEF ary ireo mpiara-miombon’antoka. Izany dia mifandraika amin’ny fifanarahana iraisam-pirenena momban’ny zon’ny ankizy ka nankatoavin’i Madagasikara
Ny minisiteran’ny mponina no hiantoka ny fandefasana ireo loka ho an’ireo mipetraka any amin’ny faritra.
Fijerena ifotony izay azo hanampiana ireo may trano tao Andohatapenaka 1 sy 3	Fizarana « kits de dignité » teto amin’ny Minisiteran’ny Mponina